နည်းပြဖြစ်လာတဲ့ တိဗက်ကြီး ၊ လူခေါ်ကြမ်းနေတဲ့ နစ္စတယ်ရွိုင်း ၊ အဲရစ်ဆင် ကို နောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့ စပါး ၊ ရီးရဲနောက်ခံလူကို စုံစမ်းလာတဲ့ ရိုးမား တို့နဲ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
နည်းပြဖြစ်လာတဲ့ တိဗက်ကြီး ၊ လူခေါ်ကြမ်းနေတဲ့ နစ္စတယ်ရွိုင်း ၊ အဲရစ်ဆင် ကို နောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့ စပါး ၊ ရီးရဲနောက်ခံလူကို စုံစမ်းလာတဲ့ ရိုးမား တို့နဲ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
June 21, 2022 June 21, 2022 - by Editor
ဘောလုံး ကစားသမား ဘဝကနေ မကြာသေးခင်ကမှ အနားယူခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှူးဟောင်းကြီး ကားလိုစ့် တိဗက် ကတော့ ပြည်တွင်း ကလပ် ရိုဆာရီယို စင်ထရယ် အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။ တိဗက် ဟာ ရိုဆာရီယို စင်ထရယ် နဲ့ ၁ နှစ် သက်တမ်း ရှိတဲ့ စာချုပ်ကို ချုပ်ဆို သွားခဲ့တာပါ ။
ဆာဒီယို မာနေး ကတော့ လီဗာပူး ကနေ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ဆီ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အတွက် မြူးနစ် ကို ရောက်ရှိလာကာ ဆေးစစ်မှု ပြုလုပ် ပြီးမြောက် ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ဘိုင်ယန် ဟာ မာနေး ကို ခေါ်ယူ နိုင်ကြောင်းကို မနက်ဖြန်မှာ ကြေညာ သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် တာဝန်ရှိသူ အချို့ ဟာ မာယော့ကာ မှာ သွားရောက် အပန်းဖြေ နေတဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီး ရောဘတ် လီဝန်ဒေ့ါစကီး ဆီ သွားရောက်ကာ အသင်းမှာ ဆက်နေဖို့ ပြောဆို ညှိနှိုင်း နေတယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ် အသင်းဟာ ဝက်စ်ဘရွန်း အသင်း ဂိုးသမား ဆမ် ဂျွန်စတုန်း ကို ခေါ်ယူဖို့ အပြည့်အ၀ သဘောတူညီမှု ရရှိ ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ပဲလေ့စ် ဟာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ကွင်းလယ်လူ ဟယ်ရီဝင့် ကို အဲဗာတန် နဲ့ အပြိုင် ကမ်းလှမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။
ဒေါ့မွန် အသင်းကတော့ အိုင်ယက်စ် တိုက်စစ်မှူး ဆီဘတ်စတီယန် ဟေလာ နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး နယ်သာလန် ကလပ် ဆီကိုလည်း နောက်တကြိမ် ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင် နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ဟာ ဘရန့်ဖိုဒ့် ကွင်းလယ်လူ ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် ကို ခေါ်ယူရေးမှာ နောက်ဆုတ် သွားခဲ့ပြီလို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘရန့်ဖိုဒ့် ကတော့ အဲရစ်ဆင် ကို အသင်းမှာ ဆက်နေဖို့ လက်မလျော့ သေးဘဲ ဆွေးနွေး သွားဦးမယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ရုဒ် ဗန် နစ္စတယ်ရွိုင်း ကို နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ် အပြီးမှာ PSV တို့ ဈေးကွက် အတွင်း ခပ်သွက်သွက် လှုပ်ရှား နေပါတယ် ။
အာဂျင်တီးနား ဂိုးသမား ဝေါ်လ်တာ ဘင်နီတက်ဇ် ကို အလွတ် နဲ့ ခေါ်ယူခဲ့သလို မန်စီးတီး ကစားသမား ဆာဗင်ဟို ကိုလည်း အငှား နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဝုဗ် အသင်း ကစားသမား လီကာနာ ဟိုဗာ ကိုလည်း တရာသီ အငှားနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိ ထားပြီး အခု ရက်သတ္တပတ် အတွင်းမှာ ဆေးစစ်မှု ပြုလုပ် သွားဖို့ ရှိနေပါတယ် ။
နာပိုလီ ရဲ့ စာချုပ်သစ် ကို ငြင်းပယ် လိုက်တဲ့ စပိန် နောက်ခံလူ ဖာဘီယံ ရုဇ် ကို အာဆင်နယ် အပါအဝင် ဥရောပ အသင်း အတော်များများက စိတ်ဝင်စားမှု ပြလာခဲ့တယ်လို့ သတင်း ကြားသိရပါတယ် ။
ဆယ်လ်တာဗီဂို အသင်းဟာ အခု နွေရာသီမှာ အသင်းရဲ့ သမိုင်းတလျောက် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် မက္ကဆီကို နိုင်ငံကို ခရီးထွက်ကာ ပူးမက်စ် အသင်းနဲ့ ခြေစမ်းပွဲ ကစားဖို့ စီစဉ် ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ရိုးမား နဲ့ အင်တာမီလန် တို့ဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ် နောက်ခံလူ နာချို ဖာနန်ဒက်စ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်း မေးမြန်း ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
မနှစ်တုန်းက ရီးရဲ ရဲ့ အားထားရတဲ့ နောက်ခံလူ တယောက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နာချို ဟာ အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ ရောက်ရှိ လာမှုကြောင့် လာမယ့် ရာသီမှာ ပွဲ ကစားရမှု အကန့်အသတ် နဲ့ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ် ထားကြပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီတုန်းက ဝုဗ် ကို အငှား သွားကစားပြီး ဘာစီလိုနာ ဆီ ပြန်ရောက်လာတဲ့ ထရင်ကာအို ဟာ နည်းပြ ဇာဗီ ရဲ့ အစီအစဉ်မှာ မပါဝင်တာကြောင့် အသင်းထပ်ပြောင်းရဖို့ ရှိနေပြီး ပေါ်တူဂီ ကလပ် စပို့တင်း လစ္စဘွန်း က စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ဆီဗီးလား ခံစစ်မှူး ဂျူးလ် ကွန်ဒေး ကိုလည်း ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် အသင်းဟာ PSG နဲ့ အေစီမီလန် တု့ိ အပြိုင် ချဉ်းကပ် နေတဲ့ လိုင်လီ ကွင်းလယ်လူ ရီနာတို ဆန်းချက် ကို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိလာခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြင်သစ် ကွင်းလယ်လူ ရာဘီယော့ ထွက်ခွာမှသာ ရီနာတို ဆန်းချက် ဘက်ကို မြားဦးလှည့်လာဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နဲ့ အင်တာမီလန် တို့ဟာ ရိုမီရို လူကာကူ အတွက် အငှားခေါ်ယူကြေး ပေါင် ၈ သန်း ဝန်းကျင် နဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိဖို့ နီးစပ် နေပြီလို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဆောက်သမ်တန် အသင်းကတော့ လီဗာပူး နောက်ခံလူ နီကို ဝီလ်ယံ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေပြီး နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် ၊ PSV နဲ့ ဖူလ်ဟမ် အသင်းတွေကလည်း နီကို ဝီလ်ယံ ကို စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အမေရိကန် လက်ရွေးစင် အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်မှု အနေနဲ့ ဥရောပ ကို လာရောက်ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၃ နဲ့ ၂၇ ရက်နေ့ တွေမှာ ဂျပန် ၊ ဆော်ဒီ အာရေဗျ အသင်းတွေနဲ့ ခြေစမ်းပွဲ ကစားသွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာတဝှမ်းက ဘောလုံး ပရိသတ်တွေဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား အိမ်ရှင် ကာတာ နိုင်ငံရဲ့ တင်းကြပ်လွန်းတဲ့ စည်းကမ်း တွေနဲ့ ဓလေ့ ထုံးစံတွေအပေါ် စိတ်ကျဉ်းကြပ်မှု ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
နောက်ဆုံး ကြားသိရတဲ့ သတင်းအရ ကာတာ ဟာ One-night Stand ( တညတာ ကာမစပ်ယှက်မှု ) ကို ပြင်းထန်စွာ တားမြစ်ထားပြီး ထောင် ၇ နှစ် အထိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် နိုင်တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . . . ။
Previous Article နည်းပြဟောင်း နှစ်ဦးအပေါ် အကောင်းမြင်ပေးရင်း တန်ဟတ် အနေနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ပိုကောင်းအောင် လုပ်သင့်လဲဆိုတာ အကြံပေးလိုက်တဲ့ ဆာဟာ
Next Article အဲရစ်ဆင်ကိုသာ ခေါ်ယူလိ်ုက်မယ်ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကထက် ပိုဆိုးသွားမယ်လို့ မန်ယူနိုက်တက်ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ မာဖီ